ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းအလှပုံတွေကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အတွက် အိချောပို ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲ | Akonthi
ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းအလှပုံတွေကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အတွက် အိချောပို ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲ
မင်းသမီးချော အိချောပိုကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်သလို ခန္ဓာကိုယ်အလှအပကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အတွက် အင်မတန် လှပသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းအလှကို အသားပေးဖော်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ တင်တဲ့အခါ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီပရိသတ်တွေအတွက် အိချောပို ပြောလိုက်တဲ့ စကားကတော့……???
ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - ထက်ပိုင်စိုး မေးမြန်း - အိဖြူသိမ့်
ခန်ဓာကိုယျနောကျပိုငျးအလှပုံတှကေို အားပေးတဲ့ ပရိသတျအတှကျ အိခြောပို ဘယျလိုပွောလိုကျလဲ
မငျးသမီးခြော အိခြောပိုကတော့ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ ထူးခြှနျသလို ခန်ဓာကိုယျအလှအပကို ထိနျးသိမျးထားတဲ့အတှကျ အငျမတနျ လှပသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျနောကျပိုငျးအလှကို အသားပေးဖျောပွထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကေိုလညျး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ တငျတဲ့အခါ အားပေးတဲ့ ပရိသတျတှေ အမြားအပွား ရှိနပေါတယျ။ အဲဒီပရိသတျတှအေတှကျ အိခြောပို ပွောလိုကျတဲ့ စကားကတော့……???
ရိုကျကူး/တညျးဖွတျ - ထကျပိုငျစိုး မေးမွနျး - အိဖွူသိမျ့